हुरी दोहोरिएर आए के गर्नेः टेन्टले धान्ला हुरी र पानी ? – Online Bichar
हुरी दोहोरिएर आए के गर्नेः टेन्टले धान्ला हुरी र पानी ?
Online Bichar 7th April, 2019, Sunday 9:41 AM
बारा, २४ चैत्र । असिना पानीसहित आएको हुरीले यहाँ वितण्डा मच्चाएको एक साता भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश गाउँलेको बास अहिले टेन्टमा छ । ओत लाग्ने अस्थायी व्यवस्था भए पनि उनीहरूमा सम्भावित हुरी र वर्षात्‌ले निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको त्रास भने हटेको छैन ।
‘हुरी दोहोरिएर आए के गर्ने ? हामीसँग विकल्प नै छैन,’ भरबलियाका ७० वर्षीय रामचन्द्र मुखियाले भने, ‘अहिले हावाहुरीको मौसम छ । वर्षातको समय नजिकिँदै छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले लेखेका छन् ।
बासस्थानको समस्या बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई बढी छ । गर्मी बढदो छ । शीतल ताप्ने छहारीसम्म छैन । रुखबिरुवा समेत हुरीले ढालेको छ, कतै हाँगाबिँगा उडाएको छ । ‘राति हावा आउँदा टेन्टसितै उडाएर लग्ला जस्तो हुन्छ,’ स्थानीय श्यामप्रसाद कुर्मीले भने, ‘डरैडरले रात काट्छौं ।’